Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guushii ay maanta ka gaareen kooxda Deportivo Alavés? – Gool FM
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guushii ay maanta ka gaareen kooxda Deportivo Alavés?
Dajiye November 30, 2019
(Madrid) 30 Nof 2019. Macalinka Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa wuxuu shaaca ka qaaday, sababta ka dambeysay guushii ay maanta ka gaareen kooxda Deportivo Alavés.
Real Madrid ayaa saddexda dhibcood kaga soo qaadatay kooxda Deportivo Alaves oo ay marti ugu noqotay Estadio de Mendizorroza, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Zidane ayaa kaddib ciyaarta wuuxu ka soo muuqday shir jaraa’id si uu ula hadlo warbaahinta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u ciyaarnay si dhab ah, waan dagaalanay, waana ogeyn inay aheyd inaan dagaalano, waxaan gaarnay guul, waxaana ku helnay saddexda dhibcood garoon aad u adag”.
“Inaad guul ku gaarto garoomada noocan ah waxay na siisaa nolosha, waxaan kulanka ku ciyaarnay shaqsiyad weyn, waxaana gaarnay guul aad iyo aad u muhiim ah”.
“Horyaalka La Liga waa mid dheer, laakiin dhibcaha maanta aad ayey muhiim inoogu ahaayeen, gaar ahaan haddii aan fiirino ciyaarta, kaddib markii ay kooxda naga soo horjeeday ku guuleysatay inay hesho goolka barbaraha, waan ogeynay inaan dhibaato la kulmi doono, laakiin si deggan ayaan ula macaamilnay xaalada”.
“Ma jiro qof u qalma abaal-marinta Ballon d'Or marka laga reebo Lionel Messi”